धन्न जोगियो मिर्गौला ! दिल्लीबाट पीडितको उद्धार - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काभ्रे वाङ्थलीका विष्णु खड्काले ख्याल-ख्यालमै भने -‘मोटरसाइकल चढ्नुपर्ने। मिर्गौला किन्ने कोही छैन ? भन है साथी हो।’
उनले यसो भनेपछि मिर्गौला तस्कर सम्पर्कमा आइहाले। तस्करसँग सम्पर्क गराउनेमध्ये एक थिए, प्रहरीकै सई योगेन्द्रराज थपलिया। उनी सशस्त्र प्रहरी १ नम्बर गणमा कार्यरत थिए। उनले मिर्गौला किन्ने एक व्यक्ति सम्पर्कमा रहेको बताएपछि कुरा गर्न खड्का राजी भए।
थपलियाले प्रहरीकै पूर्वहवल्दार थनितसिंह गुरुङकी दिदीलाई मिर्गौला चाहिएको सुनाए। त्यसबापत ५ लाख रुपैयाँ पाउने आश्वासन दिए। खड्काले उनको कुरा पत्याए। गुरुङ र उनका सहयोगी रमेश कार्कीसँग भारतको दिल्ली जान खड्का तयार भए। उनलाई गुरुङकी दिदी दिल्लीमा उपचाररत रहेको भनिएको थियो। दिल्ली पुग्नुअगावै उनले परिवारसँग सम्पर्क गर्न खोजे तर गुरुङले दिएनन्।
महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका प्रमुख डीएसपी फडिन्द्र प्रसाईंले मिर्गौला तस्करी गर्न खोजेको आरोपमा सइसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको बताए। खड्कालाई फकाएर दिल्ली पुर्‍याएको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा थपलिया, गुरुङ, कार्की र नारायण पराजुली छन्। थपलियालाई जागिरबाट निलम्बन गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस ‘हावाबाट फैलिने’ प्रमाण फेला परेको छ ...